Mogadishu Journal » Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay Garoon kubadda cagta ay xireen Al-Shabaab
Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay Garoon kubadda cagta ay xireen Al-Shabaab
Mjournal :-Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Tuulax iyo saraakiil ka tirsan hey’adaha ammaanka ayaa xalay booqday Garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaalla Xaafada Juungal ee degmada Yaaqshiid, kaasoo muddo lix bil ka hor ay xireen Al-Shabaab.
Maxamed Tuulax ayaa sheegay in in aan loo dulqaadan doonin in magaalada Muqdisho ka dhaqan galaan amarada ay soo saaraan Al-Shabaab, isagoo ku wargeliyay maamulka garoonka inay dib u furaan.
Waxaa uu sheegay in Taliska qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir iyo talisyada Saldhigyada Booliska ay u xil saaran yihiin imas’uuliyadda amniga degmooyinka, isla markaana lagula xisaabtami doono.
Inta badan Garoomada Xaafadaha ee goglan rooga ayaa lagu ciyaaraa habeenadii, waxaana dhowaan Al-Shabaab ay soo saartay amaro ay ku xireyso garoomada yaryar ee gaarka loo leeyahay, taasoo noqotay caqabad soo wajahday dhalinyarada kubadda ciyaarta.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay dalka